I-FA yokuphanda izityholo zokucula ngokobuhlanga ngabaxhasi beMillwall | 1xbet
Umbutho weBhola ekhatywayo usungule uphando kwiingxelo zokumemelela ngobuhlanga ngexesha leMillwall ephumelele iNdebe ye-FA kumjikelo wesine e-Everton, iklabhu ithembisa ukunyanzelisa ixesha lokuphila nxamnye nabaphi na abaxhasi abafunyenwe benetyala.
Ividiyo ethunyelwe kwimithombo yeendaba zentlalo ibonakala ibonisa abalandeli basekhaya besebenzisa amagama ahlaselayo ngexesha lomdlalo wangoMgqibelo ngokuhlwa eDen, okhokelele kumanyathelo yi-FA. Isiteyitimenti sifundeka ngolu hlobo: “I-FA ingangqina ukuba siyayazi ividiyo ebhalwe kwimidiya yoluntu emva komdlalo weNdebe ye-FA phakathi kweMillwall ne-Everton.Ukuziphatha okucalucalulayo kunye nokucula akunandawo kwibhola ekhatywayo kwaye sizakuwuphanda lo mbandela. ”
Kukhutshwa eyabo ingxelo, uMillwall uvakalise” ukuzingca “kuninzi lwabalandeli babo, ngakumbi ngokubhekisele” kwinkxaso ebalaseleyo. ”Banike iqela lobuntshatsheli ngethuba bephumelela i-3-2 ngokuchasene nePremier League kwimpelaveki. Nangona kunjalo, bekukho isifungo sokusebenzisana nalo lonke uphando ngokubhekisele kubuhlanga eDen nanjengoko igama leklabhu elingcolileyo laphinda labetha.
Kutshanje ngo-2017, iMillwall yaphandwa yi-FA emva kwenani Abalandeli babo batyholwa ngokukhokela ukuphathwa gadalala ngokobuhlanga kwiTottenham’s Son Heung-min ngexesha lekota yokugqibela yeNdebe ye-FA eWhite Hart Lane.Ngelo thuba, akukho manyathelo athathwe liqela elilawulayo. . “Njengokuba kuqhelekile ukulandela izehlo ezinjalo, [sisebenza] nabo bonke abasemagunyeni ngexesha lophando kulo mbandela kwaye sijonge ukufumanisa abantu ababandakanyekayo. Nabani na ochongiweyo kwaye unetyala lolwaphulo-mthetho uya kuvalwa kwiDen ubomi bakhe bonke. ”
Iqela elichasene nocalucalulo iKick It Out lizichaze izityholo zokuphathwa gadalala ngabalandeli beMillwall njengezinto“ ezicekisekayo neziqhelekileyo kwiingoma ezininzi zocalucalulo. iyaqhubeka ingohlwaywa. Siwuphinda umyalezo wethu: intiyo yobuhlanga- kunye nazo zonke iintlobo zocalulo- azinandawo kuluntu, ngakumbi hayi ku-2019.Akukho sizathu sokuba imeko yebhola ekhatywayo ingafani nalo mthetho. I-Kick It Out ifuna ukubona abasemagunyeni abafanelekileyo bethatha amanyathelo akhawulezileyo, aqinileyo nabomeleleyo. ”
Konke oku kuza emva kokuqhambuka komlo phakathi kwamaqela amabini amakhulu abantu kufutshane nesikhululo seSurrey Quays kwisithili saseLondon YaseMzantsi South ngaphambi kokuqalisa komdlalo ngoMgqibelo.Amapolisa aseMetropolitan akholelwa ukuba abo babandakanyekayo yayingabalandeli abachasayo kwaye, nangona besebenzisa iminqwazi ukuphelisa ungquzulwano, amagosa awakwazanga ukuthintela indoda enye kwiminyaka engamashumi amabini ukuba ibenenxeba ebusweni.
Amaxhoba kuthiwa ngumlandeli we-Everton UJay Burns, othumele umfanekiso wobuso bakhe enenxeba eliqatha, elibaleka lisuka emaphethelweni omlomo wakhe liye kwiliso elinye kwicala elinye kwaye lifune imithungo engama-20, kwimidiya yoluntu. Ubhale wathi: “Andikwazi nokuzijonga esipilini.” Akukho nto ihlazisayo kwaye abo babandakanyekayo banokuqiniseka ukuba siza kube sisebenzela ukubachonga, ”utshilo uMcuphi uMhloli uDarren Young. “Sijonge kuyo kwaye sibongoza nabani na onolwazi olunokunceda amapolisa ukuba abize u-101. #Southwark kwangoko namhlanje.Abo banolwazi olunokunceda amapolisa kufuneka babize i-101 ref 5117/26 Jan https://t.co/Xl9a3HzTZM pic.twitter.com/RmEY0JaIzeJanuwari 26, 2019
Kwenye indawo, amapolisa kwafuneka angenelele ngexesha le-Shrewsbury’s Ukuzoba 2-2 kunye neengcuka emva kokuba abalandeli bembangi baphose imijukujelana. Umdlalo ubuphakanyisiwe ngelixa abasebenzi bewasusa amakhwenkwe kude nendawo, nto leyo ibangele ukuba kongezwe ixesha lemizuzu emithandathu – apho iWolfs ilinganise.
Umphathi weShrewsbury, uSam Ricketts, uthe kamva: oneminyaka esibhozo ekoneni kunye namapolisa ali-100 kunye nabalandeli abalwa bodwa. [Kodwa] imizuzu emithandathu ibilixesha elibi ukongeza- kwaye ngelishwa besingakwazi ukuxhoma. “